ဧက၀ါဒမှ ဗဟုဝါဒယဉ်ကျေးမှုသစ်ဆီ အသွင်းပြောင်းတဲ့အခါ ~ Htet Aung Kyaw
10:11 PM Htet Aung Kyaw No comments
Tuesday, June 16, 2015. The Voice Daily.
တပါတီအာဏာရှင်စနစ်မှ ပါတီစုံ ဒီမုိုကရေစီစနစ်သုို့
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပုိုင်း မြန်မာနုိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေဟာ တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကနေ ပါတီစုံဒီမုိုကရေစီနစ်သုို့ ပြောင်းလဲခြင်း။ ငြိမ်းချမ်းရေးကဗျာစာဆုိုကြိး ဒဂုံတာရာရဲ့စကားလုံးကုို ငှားသုံးရမယ်ဆုိုရင် ဧက၀ါဒယဉ်ကျေးမှုကနေ ဗဟုဝါဒဆီ ယဉ်ကျေးမှုဆီ အသွင်းပြောင်းလဲခြင်းလုို့ မြင်မိပါတယ်။
မြန်မာနုိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ သမုိုင်းဆုိုင်ရာရှုမြင်ချက်အရ ၁၉၈၉ ကနေ ဒီနေ့ ၂၀၁၅ အထိကုို ပါတီစုံ ဒီမုိုကရေစီခေတ်လုို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကော်မရှင်နဲ့အစုိုးရထဲပါဝင်သူတွေမှအပ၊ အထူးသဖြင့် ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံနဲ့ အဲဒီနောက်ပုိုင်း တော်လှန်ရေး၊ နုိုင်ငံရေးဖြစ်ဉ်အတွင်း ပါဝင်ခဲ့သူတွေ ကတော့ ဒီအမြင်ကိုလက်ခံဖုို့ မလွယ်ပါ။
စာရေးသူတဦးတည်းရဲ့ အမြင်အရဆုိုရင် ၁၉၈၉ ကနေ ဒီနေ့ ၂၀၁၅ အထိ ၂၆ နှစ်တာစလုံးကို ပါတီစုံ ဒီမုိုကရေစီစနစ်အဖြစ် လက်မခံနုိုင်ပါ။ မလွဲမရှောင်သာလက်ခံရမယ်ဆုိုရင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကနေ ဒီနေ့ ၂၀၁၅ ရွေး ကောက်ပွဲအကြား ၅ နှစ်တာ ကာလလေးလောက်ကိုသာ လက်ခံချင်ပါတယ်။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါတီပေါင်း ၉၀ ကျော်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အဲဒီကာလကို ပါတီစုံဒီမုိုကရေစီခေတ်လို့ပြောမယ်ဆုို ငြင်းဖုို့ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့အခြေအနေကတော့ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးကတည်းက စစ်တပ်က ၁၀၀ ရာခုိုင်နှုန်းအပြည့်နဲ့အုပ်ချုပ်လာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအထိပါပဲ။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း နုိုင်ခြေရှိတဲ့ အတုိုက်ခံ NLD ပါတီမပါပဲ ကြံ့ခုိုင်ပါတီတခုတည်းက ဦးဆောင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တုိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ တခြားပါတီငယ်လေးတွေလည်း ၀င်ပြိုင်ခဲ့ကြတာကြောင့် ပါတီစုံ ဒီမုိုကရေစီစနစ် မဟုတ်ဘူးလုို့ ငြင်းဖို့ခက်ပြန်ရော။
ထားတော့။ အဓိကဆွေးနွေးချင်တာက ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး မ၀င်ရေးကိစ္စ မဟုတ်ပါ။ တပါတီအာဏာရှင် စနစ်ကနေ ပါတီစုံဒီမုိုကရေစီနစ်ဆီ အသွင်ပြောင်းတဲ့အခါ ဘာတွေလုပ်ဖုို့လုိုအပ်သလဲ။ ဘာတွေပြောင်းဖို့လုိုအပ်သလဲ ဆုိုတဲ့အပုိုင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်မေးမြန်း၊ စကားပြောခွင့်ရသလောက်လူတွေရဲ့အဆုိုအရ တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကနေ ပါတီစုံဒီမုိုကရေစီစနစ်ဆီ အသွင်ပြောင်းတာကို ကန့်ကွက်သူမရှိပါ။ အားလုံးက ဒီမုိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေ လုိုချင်နေကြတာ ထင်ရှားစွာတွေ့ရပါတယ်။ အရှိန်အဟုန်နဲ့တုိုးတက်နေတဲ့ ပြင်ပကမ္ဘာကုို အမှီလုိုက်နုိုင်ဖို့လည်း အားလုံးကအစွမ်းကုန် ကြိုးစားချင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။
တဘာသာစနစ်မှ ဘာသာပေါင်းစုံ၊ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ စနစ်သုို့
နုိုင်ငံရေးအရ တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကနေ ပါတီစုံဒီမုိုကရေစီစနစ်ဆီသွားတာကို အားလုံးက လုိုလုိုလားလားလက်ခံကြပေမဲ့ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်၊ ယဉ်ကျေးမှုလွတ်လပ်ခွင့် သို့မဟုတ် ဘာသာပေါင်းစုံ၊ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံထွန်းကားရေးအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာတော့ လူအတော်များများဟာ ဒီ ၂ ခုကုိုတွဲမြင်ဖုို့လုိုတယ်လုို့ ထင်မထားကြပါ။ တနည်းအားဖြင့် နုိုင်ငံရေးစနစ်ပြောင်းတဲ့အခါ လူမှုရေးစနစ်တွေ၊ စဉ်းစားပုံတွေ၊ လူမျိုးကြီးဝါဒတွေ၊ ဘာသာကြီး ၀ါဒတွေကိုပါ ပြောင်းဖို့လုိုတယ်ဆုိုတာကို ဆက်စပ်စဉ်းစားမိသူ အတော်နည်းနေသေးတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဧက၀ါဒကနေ ဗဟုဝါဒကုိုပြောင်းတော့မယ်လို့ တကယ်ဆုံးဖြတ်ပြီဆိုရင်တော့ နုိုင်ငံရေးစနစ်တင်မက လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုလုံးရဲ့ စဉ်းစားပုံတွေ၊ တန်ဖုိုးထားမှုတွေကိုပါ ပြောင်းလဲဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ နုိုင်ငံရေးအရတော့ ပွင့်လင်းလွတ်လပ်တဲ့ပါတီစုံဒီမုိုကရေစီစနစ်ကိုတောင်းဆုိုပြီး ဘာသာရေးအရတော့ ဗုဒ္ဒဘာသာကို နုိုင်ငံတော်ဘာသာ အဖြစ်ပြဌဏ်းဖုို့ကြိုးစားမယ်၊ အမျိုး၊ ဘာသာစောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေတွေကုို လွှတ်တော်အမတ်တွေက ထုတ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆုိုရင် ဒီအပြောင်းအလဲဟာ ဟန်ချက်ညီပြောင်းလဲမှု မဖြစ်နုိုင်ပါ။
တကယ်တော့ ဒီလုိုသဘောထားရှိနေတာဟာ ဘာသာခြား၊ လူမျိုးခြား လက်မခံရေးအတွက် ဆန္ဒပြပွဲ အကြီးအကျယ်လုပ်နေတဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာ တင်မဟုတ်။ ပါလီမန်ထဲကအမတ်မင်းတွေ၊ နုိုင်ငံရေးပါတီ အသီးသီးက ခေါင်းဆောင်တွေ၊ လူမှုရေးကိုဦးဆောင် လမ်းပြနေတဲ့ သဃာင်္တော်တွေ၊ ကျေးလက်ဒေသအသီးသီးက ရပ်မိရပ်ဖတွေအထိ ဒီအမြင်ရှိနေတယ်လို့ တွက်ဆမိပါတယ်။
ဘာကြောင့် အမြင်ဟောင်းတွေကို မစွန့်လွှတ်နုိုင် ဖြစ်နေကြတာလဲ။ နုိုင်ငံရေးအရတော့ ၂၁ ရာစု နောက်ဆုံး ပေါ် ပါတီစံဒီမုိုကရေစီစနစ်ကိုလုိုချင်ပြီး ဘာသာရေးနဲ့ အမျိုးသားရေးကြတော့ ၁၆ ရာစု၊ အလယ်ခေတ်က ဘုရားကျောင်းတော် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဆီ ဘာကြောင့် ပြန်သွားချင်နေကြတာလဲဆုိုတာ မေးခွန်း ထုတ်ချင်စရာကြီးပါ။
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက် အထီးကျန်ကမ္ဘာမှာ အနေကြာသွားခဲ့လုို့လား
ဘာသာပေါင်းစုံ၊ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ အတူယှဉ်တွဲနေထုိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြီးခဲ့လအတွင်းက အော်စလုိုမှာ ခဏတာ ဆွေးနွေးခွင့်ရလုိုက်တဲ့ မန္တလေးမှ သံဃာင်္တော် ၃ ပါးနဲ့ ခရစ်ယန်ဆရာ ၂ ပါးရဲ့ အမြင်ကို ကောက်နှုတ်တင်ပြချင်ပါတယ်။
‘’တကယ်တော့ စစ်ဗုိုလ်တွေတင်မကပါဘူး။ ဘုန်းဘုန်းတုို့လည်း အာဏာရှင်ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်ခဲ့တယ်လေ’’ လုို့ မန္တလေးမှ သံဃာင်္တော်တပါးကမိန့်ပါတယ်။ ‘’ကျောင်းသားနှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်ပြီဆုိုရင် ဘာမှမေးမနေ ဘူး။ တယောက် ၅ ချက်စီလောက် ခပ်ပြင်းပြင်း အရင်ဆော်ထည့်လုိုက်တာပဲ’’ လုို့ သူ့အတွေ့အကြုံ ကုိုပြောပြပါတယ်။ အဲဒါ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က ကမ္ဘောဒီးယားနုိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့ Dialogue သင်တန်းတက်ပြီးမှ ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆုိုတာကိုလည်း မမေး၊ အဖြေရှာပေးဖုို့လည်းမကြိုးစားပဲ အရင်တီးခဲ့တာတွေဟာ မှားခဲ့တယ်ဆုိုတာ သူသိလာတယ်လို့ ဆရာတော်ကဆုိုပါတယ်။
၀ါတော် ၃၀ ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့ ခရစ်ယန်ဆရာတော်ကတော့ သံဃာင်္တော်အများစုဟာ ဗုဒ္ဒဘာသာကလွဲပြီး တခြားဘာသာတွေအကြောင်းမလေ့လာဖူးတဲ့အတွက် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် အချင်းအချင်း အပြန်အလှန်လေးစားစွာ ဆက်ဆံရေးကို နားလည်သူ အအတော်နည်းသေးတယ်လုို့ပြောပါတယ်။ ‘’(တခြားဘာသာတွေကို ပုတ်ခတ်ဝေဖန်မှု နဲ့) မန္တလေးမှာ အခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ဆရာတော်လေဗျာ။ သူ့စာအုပ် လက်ဆောင်ပေးမယ်၊ လာယူပါဆုိုပြီးဖိတ်လုို့ သွားတာ။ ဟုိုလည်းရောက်ရော့၊ သူ့ကုို ဦးခုိုက်ကန်တော့ရမယ်လုို့ပြောတယ်ဗျာ။ တကယ်ဆုို ကျုပ်က သူထက် ၀ါ ကြီးတယ်လေ’’ လုို့ ခရစ်ယန်ဆရာက ဆုိုပါတယ်။
ဒီအမြင်ကုို တခြားဘာသာတွေအကြောင်းမလေ့လာဖူးတဲ့ မိရုိုးဖလာ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တဦးက နားလည်ဖုို့ လွယ်မယ် မထင်ပါ။ ကျနော်ကိုယ်တုိုင်လည်း ၁၉၉၀ ၀န်းကျင်က တွေ့ဖူးတဲ့ဓာတ်ပုံထဲမှာ KNU ကရင့်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် (ခရစ်ယန်ဘာသာဝင်) ဗုိုလ်ချုပ်မြနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်ကြားဝင်ပေးသူ လန်ဒန်မှ ဗုဒ္ဒဘာသာဆရာတော် ဦးရေဝေတ္တတို့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေတဲပုံကုို လက်မခံနုိုင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကုို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်စရာလားပေါ့။
YMCA မှဆရာတဦးကတော့ မန္တလေးတုိုင်းထဲက နယ်မြို့တခုမှာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ သူတုို့အသင်းကနေ စာသင်ကျောင်းလေးတခု ဖွင့်ထားတာ ၆ လလောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြာင်း၊၊ ဒါပေမယ့် တလောကတော့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးက သူ့ကုိုခေါ်ပြီး ဒီကျောင်းကုိုပိတ်မှဖြစ်မယ်လို့ ပြောကြောင်းသိ ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆုိုပြီးမေးတော့ ‘’ဘာသာခြားတွေကို လက်မခံဖုို့ သံဃာင်္တော်တွေဆီက ကန့်ကွက်စာရောက်နေလုို့ ဆက်ဖွင့်ခွင်ပေးဖုို့ မဖြစ်နုိုင်တော့ဘူး’’ ဆုိုပြီး မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ကပြောတယ်လုို့ ဆုိုပါတယ်။
‘’အဲဒီတော့ ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ဗျာ။ တရားဥပဒေစုိုးမုိုးမှုတုို့၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတုို့အပေါ်မှာ ဘာသာရေး အဖွဲ့တွေက ရှိနေတယ်လေ၊ အစိုးရကခွင့်ပြုထားတဲ့ကိစ္စကုို ဘာသာရေးအဖွဲ့ကကန့်ကွက်လုို့ လက်မခံ နုိုင်တော့ဘူးဆုိုတာ ဒီမုိုကရေစီခေတ်မှာ ဖြစ်သင့်သလား’’ လုို့ သူက ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါတွေဟာ ဘာသာတခုနဲ့တခုကြားမှာ ဆက်သွယ်မှုမရှိခဲ့လုို့၊ တနည်းအားဖြင့် ကုိုယ့်ဘာသာခြံခတ်ပြီးနေခဲ့ တာ နှစ် ၅၀ ကျော်ကြာသွားတာကြောင့်ဖြစ်နုိုင်ပါတယ်။ မန္တလေးကဆရာတော် နောက်တပါးရဲ့ အတွေ့အကြုံကုို ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါဦး။ ‘’၂၀၀၈ နာဂစ်မုန်တုိုင်းဝန်းကျင်က မန္တလေး MYCA ကနေ ဘုန်းဘုန်းတုို့အဖွဲ့ကုို လူမှုရေးသင်တန်းအတွက် လူနှစ်ယောက်ပေးဖုို့တောင်းပါတယ်။ ဆယ်တန်း အောင်ပြီသား အမျိုးသမီး ၂ ဦးကိုပုို့ဖုို့ပြင်ရင်း တညလုံး ဘုန်းဘုန်းအိပ်မပျော်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆုိုတော့ ဗုဒ္ဒဘာသာ အမျိုးသမီးလေးနှစ်ယောက်ကို ခရစ်ယန်အသင်းကလုပ်မဲ့ သင်တန်းဆီပုို့လုို့ သင့်တော်ပါ့မလား။ ဘာသာခြားတွေနဲ့ ဒီလုိုတွဲလုပ်လုို့သင့်ပါ့မလား’’ ဆုိုပြီး စုိုးရိမ်လွန် သွားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ဆရာတော်က မိန့်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အဲဒီအချိန်အထိ ဗုဒ္ဒဘာသာနဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အခြားဘာသာ အခြားလူမျိုးတွေထက် ပုိုမြင့်မြတ်တယ်ဆုိုပြီး သူ့စိတ်ထဲ ထင်နေဆဲလုို့လဲ ဆရာတော်ကဆုိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလုို တခြားဘာသာတွေနဲ့ စတင်လက်တွဲဆောင်ရွက်ရာကနေ ဘာသာမတူ၊ လူမျိုးမတူသူတွေကြား အတူတကွရှင်သန်နေထုိုင်ရေး အတွက် interfaith dialogue အစီစဉ်တွေကို သူတို့ကုိုယ်တုိုင် ဦးစီးဆောင်ရွက်နေပြီလုို့ ဆရာတော်တွေက မိန့် ကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီမုိုကရေစီနဲ့ ဗဟုဝါဒယဉ်ကျေးမှုကို တကယ်ယုံကြည်သလား
ပါတီစုံဒီမုိုကရေစီစနစ်ဆီ ချီတက်နေပါတယ်လုို့ ကမ္ဘာသိကြေညာထားတဲ့လူတွေကို ဒီမုိုကရေစီကုို ကတယ်ယုံ ကြည်ပါသလားလုို့သွားမေးရတာကိုက တခုခုလွဲနေသလုိုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ မမေးလုို့မဖြစ်။ ဘာသာစုံ၊ လူမျိုးစုံ၊ ယဉ်ကျေး မှုပေါင်းစုံ အတူတကွရှင်သန်နေထုိုင်ရေးဆုိုတာကုို မူ အရလက်ခံပေမဲ့ လက်တွေအရ ဆောင်ရွက်ဖို့ပျက်ကွက်နေသူတွေထဲမှာ အာဏာသိမ်းသူတွေ၊ အာဏာရနေ သူတွေတင်မက ဒီမုိုကရေစီအင်အားစုတွေထဲက လူတချို့လည်း ပါဝင်နေတယ်လုို့ ယူဆရပါတယ်။
အခြားဘာသာ၊ အခြားလူမျိုးတွေကို ဝေဖန်ပုတ်ခတ်မှုနဲ့ အခုတလောနာမည်ကြီးနေတဲ့ ပါတီဥက္ကဌ တယောက်ဆုိုရင် ဘာသာခြား၊ လူမျိုးခြားတွေကုို သတ်ပစ်ရမယ်၊ သတင်းသမားတွေကုိုလည်း ခေါင်းဖြတ်မယ်ဆုိုပြီး အများပြည်သူရှေ့မှာ ပေါ်တင်ငြိမ်းခြောက်တဲ့အထိ ဖြစ်လာနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမုိုကရေစီကုိုတကယ်ယုံကြည်ပါတယ်လုို့ ကမ္ဘာသိကြွေးကြော်ထားတဲ့ အစိုးရနဲ့ အတုိုက်အခံ အမတ်မင်းတွေက အခုချိန်ထိ ဒီလုိုအမုန်းတရားဟောနေသူတွေကို ဘာမှ အရေးယူခြင်းမရှိသေးပါ။
အမျိုးဘာသာကာကွယ်ရေးဥပဒေပဲထုတ်နုိုင်ပြီး ဒီလုိုအမုန်းတရားဟောပြောသူကုို အရေးယူနုိုင်တဲ့ ဥပဒေကျ လွှတ်တော်မှာ အဆုိုတင်မဲ့သူ မရှိဘူးလား။ ဒီမုိုကရေစီထွန်းကားတဲ့ ဥရောပနုိုင်ငံတွေမှာတော့ အစုိုးရနဲ့အတုိုက်ခံကုို နုိုင်ငံရေးအရ ကြိုက်သလုိုဝေဖန်၊ ဘယ်သူကမှ အရေးမယူပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရးခွဲခြားတဲ့ Racism အကြောင်းပြောလုို့၊ ဟောလုို့ကတော့ ရဲက ချက်ချင်းအဖမ်းခံရပြီ သာမှတ်။
ဆုိုလုိုတာက ဒီမုိုကရေစီကိုတကယ်ယုံကြည်တယ်ဆုိုရင် အပြန်အလှန်လေးစားမှု mutual respect ရှိဖုို့လုိုပါတယ်။ ငါတုို့ကလူမျိုးကြီး၊ ငါတုို့က ဘာသာကြီးဆုိုပြီး သွားလုပ်လုို့မရပါ။ ဒါ လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားတွေကုိုတင်ပြောတာ မဟုတ်။ ဘာသာတူတဲ့တုိုင်းရင်းသားတွေအချင်းချင်းကြားမှာလဲ ဗမာလူများစုက လူမျိုးကြီးဝါဒကုို ကျင့်သုံးလုို့ မဖြစ်ပါ။ တုိုင်းရင်းသားညီအကိုတွေလုို့ ပါးစပ်ကပြောပြီး လက်တွေ့ကျတော့ ဗမာလူများစုက အကိုကြီးနေရာကချည်းအမြဲယူထားပြီး ကယ်တင်ရှင်ပုံစံ ဖမ်းနေလုို့မရပါ။
အနှစ်ချုပ်ရရင်တော့ တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကနေ ပါတီစုံဒီမုိုကရေစီစနစ်ဆီပြောင်းတယ်ဆုိုကတည်းက နုိုင်ငံရေး အမြင်တခုတည်း ပြောင်းလုို့မရပါ။ ဘာသာရေးပေါင်းစုံ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ အတူတကွရှင်သန်နေထုိုင်နုိုင်တဲ့၊ ဗဟုဝါဒ ရှင်သန်ခွင့်ရတဲ့ အခင်းအကျင်းမျိုးဖြစ်လာအောင် လူတွေရဲ့ စဉ်းစားပုံတွေ၊ တန်းဖုိုးထားမှုတွေ၊ ကုိုယ်ဘာသာ ခြံခတ်နေချင်တဲ့စိတ်တွေကုိုပါ တပါတည်းပြောင်း ဖို့လုိုပါတယ်။
အဲဒီလုို တစုံလုံးအပြောင်းအလဲကိုလုပ်နုိုင်မှသာ ၁၆ ရာစု ဘုရားကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေး အတွေးအခေါ်တွေ ကနေ ရုန်းထွက်နုိုင်ပြီး ဒီနေ့ တုိုးတက်နေတဲ့ ၂၁ ရာစု ကမ္ဘာသစ်ကုို အမီလုိုက်နုိုင်ဖုို့ ခြေလှမ်းသစ်တွေ စတင်လှမ်းနုိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလုိုက်ရပါတယ်။ ။